“ဝေဘာဂီဆေးရုံအတွက် အလှူငွေ (၁၀၂၀၀၀၀)တိတိကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေတ္တာအင်္သချေအနုပညာရှင် ပရဟိတအဖွဲ့” | CeleTrend
“ဝေဘာဂီဆေးရုံအတွက် အလှူငွေ (၁၀၂၀၀၀၀)တိတိကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ မေတ္တာအင်္သချေအနုပညာရှင် ပရဟိတအဖွဲ့”
ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ပွင့်နဒီမောင်ကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ခင် ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်နော် ။ ပွင့်နဒီမောင်ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်နဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးငွေတွေကို အနုပညာရှင်နဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မေတ္တာအင်္သချေ ပရဟိတအဖွဲ့ကနေ လှူဒါန်းမှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို နားထားရတဲ့ အချိန်လေးမှာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ထူးခြားနဲ့ ပေါင်းကာ ဝက်နံရိုးအချိုပေါင်း ကို Online ကနေ ရောင်းချနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်.။ ဒီနေ့ မေလ (၄)ရက်နေ့မှာတော့ ပွင့်နဒီမောင်က သူမတို့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ မေတ္တာအင်္သချေ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းကနေ ဝေဘာဂီဆေးရုံကို လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ အလှူလေးအကြောင်းကို “အကြောက်တရားများကြားထဲက သဒ္ဒါတရားလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်မယ်နော် …။ လစဉ်လတိုင်း အလှူလေးဖြစ်တဲ့ ပိုးအိတို့ရဲ့ မေတ္တာအင်္သချေ မောင်နှမတွေပေါင်းစည်းထားတဲ့ (၇) ရက်သားသမီး အလှူငွေကို ဝေဘာဂီဆေးရုံမှာ ငွေသား ကိုးသိန်းနှစ်သောင်း (၉၂၀၀၀၀)၊ mask အတွက် တစ်သိန်း (၁၀၀၀၀၀) စုစုပေါင်းအလှူငွေ ဆယ်သိန်းနှစ်သောင်း (၁၀၂၀၀၀၀) တိတိကို ဝေဘာဂီဆေးရုံအတွက် ဆေးရုံအုပ်ကြီးကို လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ သုံးရအောင် လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ် . ။
ဒီလ မဲပေါက်တဲ့သူကတော့ Designers Yin Thu Swe ဝေဘာဂီ ကို လှူဖို့ဆုံးဖြတ်တာ သူပေါ့ .။ နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် လစဉ်လတိုင်း ကုသိုလ်ပြုရင်း ပျော်ပျော်ရွင်ရွှငိ အတူတူလျောက်လှမ်းကြပါစို့.။ နတ်လူသာဓုခေါ်စေသော်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်.။ ပွင့်နဒီမောင်ကတော့ သူမတို့ပရဟိတအဖွဲ့လေးရဲ့ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူလေးကို ပရိသတ်တွေလည်း သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်အောင် မျှဝေလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော် ပရိသတ်ကြီး.။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပွင့်နဒီမောင်တို့ရဲ့ မေတ္တာအင်္သချေ ပရဟိတအဖွဲ့လေးရဲ့ အလှူအတွက် သာဓုခေါ်ဆိုသွားကြပါဦးနော်.။
Source: Pwint Nadi Maung’s Facebook
ကရြာဇာတျရုပျတိုငျးကို ပီပွငျအောငျ သရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ သရုပျဆောငျ ပှငျ့နဒီမောငျကိုတော့ ပရိသတျကွီးလညျး ခဈြခငျ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျနျော ။ ပှငျ့နဒီမောငျဟာ ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြနဲ့ အားပေးမှုတှကေို ရရှိပိုငျဆိုငျထားပွီး အနုပညာအလုပျတှကေို လုပျကိုငျရငျး ရရှိတဲ့ အနုပညာကွေးငှတှေကေို အနုပညာရှငျနဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ မတ်ေတာအင်ျသခြေ ပရဟိတအဖှဲ့ကနေ လှူဒါနျးမှုတှကေို လုပျဆောငျနတောပဲဖွဈပါတယျ.။
လကျရှိမှာ အနုပညာအလုပျတှကေို နားထားရတဲ့ အခြိနျလေးမှာ တဈဖကျတဈလမျးအနနေဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူ ထူးခွားနဲ့ ပေါငျးကာ ဝကျနံရိုးအခြိုပေါငျး ကို Online ကနေ ရောငျးခနြတောပဲဖွဈပါတယျ.။ ဒီနေ့ မလေ (၄)ရကျနမှေ့ာတော့ ပှငျ့နဒီမောငျက သူမတို့ အနုပညာရှငျတှနေဲ့ ပါဝငျဖှဲ့စညျးထားတဲ့ မတ်ေတာအင်ျသခြေ ပရဟိတအဖှဲ့အစညျးကနေ ဝဘောဂီဆေးရုံကို လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ အလှူလေးအကွောငျးကို “အကွောကျတရားမြားကွားထဲက သဒ်ဒါတရားလို့ ခေါငျးစဉျတပျမယျနျော …။ လစဉျလတိုငျး အလှူလေးဖွဈတဲ့ ပိုးအိတို့ရဲ့ မတ်ေတာအင်ျသခြေ မောငျနှမတှပေေါငျးစညျးထားတဲ့ (၇) ရကျသားသမီး အလှူငှကေို ဝဘောဂီဆေးရုံမှာ ငှသေား ကိုးသိနျးနှဈသောငျး (၉၂၀၀၀၀)၊ mask အတှကျ တဈသိနျး (၁၀၀၀၀၀) စုစုပေါငျးအလှူငှေ ဆယျသိနျးနှဈသောငျး (၁၀၂၀၀၀၀) တိတိကို ဝဘောဂီဆေးရုံအတှကျ ဆေးရုံအုပျကွီးကို လိုအပျတဲ့နရောမှာ သုံးရအောငျ လှူဒါနျးခဲ့ပါတယျ . ။
ဒီလ မဲပေါကျတဲ့သူကတော့ Designers Yin Thu Swe ဝဘောဂီ ကို လှူဖို့ဆုံးဖွတျတာ သူပေါ့ .။ နောကျထပျ နှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျ လစဉျလတိုငျး ကုသိုလျပွုရငျး ပြျောပြျောရှငျရှငိ အတူတူလြောကျလှမျးကွပါစို့.။ နတျလူသာဓုချေါစသေျော” ဆိုပွီး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ.။ ပှငျ့နဒီမောငျကတော့ သူမတို့ပရဟိတအဖှဲ့လေးရဲ့ မှနျမွတျတဲ့ အလှူလေးကို ပရိသတျတှလေညျး သာဓုချေါဆိုနိုငျအောငျ မြှဝလောခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျနျော ပရိသတျကွီး.။ ပရိသတျကွီးလညျး ပှငျ့နဒီမောငျတို့ရဲ့ မတ်ေတာအင်ျသခြေ ပရဟိတအဖှဲ့လေးရဲ့ အလှူအတှကျ သာဓုချေါဆိုသှားကွပါဦးနျော.။
ပြန်ဖွင့်လာသည့် အိန္ဒိယအရက်ဆိုင်များတွင် အရက်သမားများ မနက်အစောကြီးထပြီး တန်းစီဝယ်ယူနေ